News18 Nepal || कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास, मानवमा समेत सफल परिक्षण - News18 Nepal
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास, मानवमा समेत सफल परिक्षण
एजेन्सी । चीनले काेराेना भाइरसविरुद्धको अर्काे खोप (भ्याक्सिन) विकसित गरेको दाबी गरेकाे छ ।​ राेयटर्सकाे रिपाेर्ट अनुसार चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) ले आइतबार यसकाे जानकारी दिएकाे हाे ।
​रिपाेर्ट अनुसार याे खाेप मान्छेमा पनि परीक्षण गरिएकाे छ । पहिलाे परीक्षणमा खाेप सुरक्षित देखिएकाे छ । चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुपले कोरोनाविरुद्धको दाेस्राे खाेप तयार गरेकाे हाे । यही कम्पनीले यसअघि वुहानकाे युनिटमा एक अर्काे खाेप तयार गरेकाे थियाे ।
सीएनबीजीले यस बारे चिनियाँ सामाजिक सन्जाल विच्याटमा पनि जानकारी दिएकाे हाे । क्लिनिकल ट्रायलकाे फेज १/२ मा १ हजार १ सय २० जना स्वस्थ्य मानिसमा खाेप परीक्षण गरिएकाे थियाे । खाेप परीक्षण गरिएका व्यक्तिमा उच्च मात्रामा एन्टिबडीज पैदा भएकाे दाबी गरिएकाे छ ।
राेयटर्सकाे रिपाेर्ट अनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई हालसम्म ८ खाेप क्यान्डिटलाई मान्छेमा परीक्षणकाे अनुमति दिइएकाे छ । खाेप परीक्षण गर्दा पहिलाे र दाेस्राे चरणकाे सफल नतिजा आएमा तेस्राे चरणमा अझ परीणाममुखी हुनुपर्दछ ।
तेस्राे चरणमा हजाराैँमा खाेपकाे परीक्षण गरिन्छ । र तेस्राे चरणमा पनि सफल नतिजा आएमा आममानिसका निम्ति खाेप दिन अनुमति दिइन्छ ।
नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने को हुन् ?
अन्तरिक्षबाट विशाल तारा एकाएक गायब भएपछि..
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोरोना खोप परीक्षण सकारात्मक, ८ हजार जनाले लगाउँदै
शरीरमा कसरी फैलिन्छ कोरोना ? वैज्ञानिकले गरे यस्तो खुलासा